स्पेनिश शेयर बजार को तातो मान अर्थव्यवस्था वित्त
स्पेनिश शेयर बजारमा तातो मानहरू
वसन्तको आगमनले इक्विटी वित्तीय बजारलाई पनि असर गरेको छ। राष्ट्रिय शेयर बजारमा तातो मानहरूको एक महत्त्वपूर्ण सूची बनाउने बिन्दुमा। यसले तपाईं बाट अब धेरै पैसा गुमाउन सक्छ। तर उही कारणका लागि, तिनीहरू वास्तविक व्यवसाय अवसर प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् मुद्रीकरण गर्नुहोस् सफलतापूर्वक तपाईंको बचत। धेरै जसो यी परिस्थितिहरू आफ्नै कारणले हुन्छन् व्यापार कमजोरीहरू। तर यो मात्र कारण होईन, तर व्यापार आन्दोलनहरूले केही स्टक मानहरूमा यो खास परिदृश्यलाई आकार दिन मद्दत गरिरहेको छ।
यो तपाईलाई पहिचान गर्न धेरै उपयोगी छ जुन यस समयमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानहरू छन्। एक केसमा, तपाईको स्थिति छोड्नुको मुख्य उद्देश्यको साथ अबदेखि तपाईको आय विवरणलाई हावी हुनबाट रोक्नको लागि। तर अरूमा होईन, यसले तपाईंलाई इक्विटी बजारहरूसँग यस वर्ष अहिलेसम्म पहिलो सम्पर्क सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू हुन सक्छन् धेरै लाभदायक अपरेशनहरू तपाईको चासो को लागी, तर जब सम्म तपाई लगनपूर्वक र सबै भन्दा धेरै चिसो रगत माथि कार्य गर्नुहुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै जोखिमहरू छन् उनीहरूको सेयरहरू खरीद गर्दा।
सकारात्मक पक्षबाट, तपाईं जहिले पनि त्यो अधिकतम लागू गर्न सक्नुहुनेछ जुन वित्तीय बजारमा सब भन्दा आशावादी लगानीकर्ताहरूको संकेत दिन्छ। यस अर्थमा कि तपाईले हराउनु भन्दा बढी प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यहाँ यो धेरै अनौंठो परिदृश्य वर्णन गर्न एक धेरै साधारण कारण छ। यो कम मूल्य बाहेक अरू केही हो जुन मार्केटको केही तातो मान सूचीबद्ध गरिएको छ। तिनीहरूका मूल मूल्यहरूमा %०% भन्दा बढी छुटको साथ। के मा अब देखि स्थिति खोल्न को एक धेरै आकर्षक शर्त को रूप मा रूपान्तरण गरिएको छ। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि केहि मानिसहरु लाई केहि यी तातो मानहरु संग जुन स्पेनी इक्विटीहरु उपस्थित छन्? ख्याल राख्नुहोस् किनभने तिनीहरू केहि कम छन्।
1 तातो स्टक: बानको लोकप्रिय
2 एक पूंजी वृद्धि अन्तर्गत sniace
3 Abengoa एक चौराहेमा
4 गोरूहरू को दर्शनीय स्थानमा बावरिया
5 गेम्सआ, सबैभन्दा सिफारिश गरिएकोमा
तातो स्टक: बानको लोकप्रिय
कुनै श doubt्का बिना, वर्षको यस अवधिमा राष्ट्रिय शेयर बजार मा तातो मूल्य। यो कुराको लागि कि यसको सेयरहरू पहिले नै एक यूरो युनिट तल ट्रेड गर्दैछन्। वित्तीय समूहमा लगानी गर्नेहरू र उनीहरूको बचतलाई महिनौंको अवमूल्यन भएको देखेर निराश हुन। स्तर पुग्न नसक्दासम्म ती मध्ये धेरैलाई कल्पना गर्न कठिन छ। जबकि मोलतोल शिकारी तिनीहरूले महत्वपूर्ण पूंजीगत लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यको साथ कुनै पनि समयमा आफ्नो सञ्चालनहरू सुरू गर्न यस नेटवर्कमा यस नेटवर्कमा उनीहरूको प्रवृत्ति रहेको छ। वा कमसेकम त्यो यसको मुख्य उद्देश्य हो।
वित्तीय विशेषज्ञहरूको विचारमा, बान्को पपुलरको समस्याहरूको समाधानमा दुई राम्रा परिभाषित रणनीतिहरू समावेश छन्। ती मध्ये एक महत्त्वपूर्णको अनुभूतिमा रहन्छ पूंजी वृद्धि। जे होस् उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ र त्यसले कसरी साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको चासोलाई असर गर्ने छ। यो समयलाई यस जटिल मान प्रविष्ट गर्ने समय हो वा छैन भनेर स्पष्ट पार्न यो कुञ्जी मध्ये एक हो। अचम्म नमानी, तपाईले आफ्नो कार्यको विकास निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाढाको भविष्यमा।
वित्तीय संस्थाका लागि उत्पन्न हुने अर्को परिदृश्य यो अर्को वित्तीय समूह द्वारा अधिग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना छ। मा पनि शेयर बजार समूहहरु यो भनिएको थियो कि एक ठूलो राष्ट्रिय बैंकिंग समूह व्यापार संचालनमा धेरै चासो राख्दछ। यस परिदृश्यले कसरी सानो र मध्यम लगानीकर्ताको रूपमा तपाईंको रूचिलाई असर गर्दछ? ठीक छ, यस समयमा यो एक विशिष्ट रणनीति मार्फत पुष्टि गर्न सकिदैन, यो टाढाबाट। हाम्रो देशको बैंकि sector्ग क्षेत्रमा यो नयाँ परिदृश्य अन्ततः पुगेको छ भने हामीले अवस्था थाहा पाउन पर्खनु पर्नेछ।
जे भए पनि, त्यहाँ धेरै अज्ञातहरू छन् जुन बन्को पपुलरले हालै प्रस्तुत गर्दछ, यसको सेयरहरूको सञ्चालनको बारेमा निर्णय लिन। जे होस् प्राथमिक हो यो कम प्राइमको कारण प्रलोभन हुन सक्छ जुनमा यसको सेयरहरू सूचीबद्ध छन्। जे भए पनि, यो परिदृश्य जहिले पनि खराब हुँदै जान्छ यदि आउँदो हप्ताहरूमा यस गम्भीर समस्याको समाधान देखिएन भने।
एक पूंजी वृद्धि अन्तर्गत sniace
यद्यपि यो एक धेरै सानो क्याप सुरक्षा हो, यो वास्तवमै धेरै पछि खुल्ला लगानीकर्ताहरु द्वारा पछ्याइन्छ। विशेष गरी उनीहरूको अपरेशहरू के छोटो अवधिमा वा सट्टा प्रकृतिको साथ विनियोजित गर्दछ। पूंजी वृद्धि यी कम्पनीहरूमा पहिलेदेखि नै रहेका मानिसहरूका लागि राम्रो छैन किनकि छोटो अवधिमा यसले एक उत्पादन गर्दछ उनीहरूको मूल्यमा कमजोर पड़। कमसेकम छोटो अवधिमा र यो मान्दै कि तपाईं स्थायित्वको लामो अवधिको लागि आफ्नो स्थानहरू ट्रेस गर्न सक्नुहुनेछ।
जे भए पनि, यस्तो लाग्दछ कि यसको उल्टो सम्भावना खुला स्थानहरूको लागि धेरै आकर्षक छैन। यसमा यसको नजिकको उद्देश्यहरू मध्ये एक रहेको छ स्तर प्रति शेयर आधा यूरोको नजिक। थप रूपमा, यो एक अत्यधिक शान्त व्यापार स्थिति छैन जुन बैंकको द्वारा यसको ब्यापार मोडेलका लागि प्रदान गरिएको ofणका आधारमा धेरै निर्भर गर्दछ। यस अर्थमा, शेयर बजार मा यसको विकास वित्तीय बजार मा यसको प्रत्यारोपण को समाचार संग जोडिएको छ।
Abengoa एक चौराहेमा
La कम्पनी को नयाँ पुनर्संरचना सूचीबद्ध गरिएको सब भन्दा प्रासंगिक घटनाहरू मध्ये एक हो पलको सब भन्दा साहसी स्टक मध्ये एक। तर विवरणहरूको श्रृंखलासँग जुन सन्तुलनलाई एक दिशा वा अर्कोमा टिप गर्न सक्दछ। तर अहिले यो स्पानिजको निरन्तर बजारमा इक्विटीमा सबैभन्दा सक्रिय बेट्सको रूपमा देखा पर्दै छ। प्रतिस्पर्धी पूंजीगत लाभ भन्दा बढी प्राप्त गर्न ठूलो सम्भावनाहरूको साथ, तर जोखिमको श्रृंखलासँग जुन साना र मध्यम लगानीकर्ताहरू बीच सँधै अव्यक्त रहन्छ।
यस अर्थमा, यो बाहिर खडा छ कि दुई ठूला स्पेनिश बैंकहरू (स्याटान्डर र सबाडेल) सेभिलियन औद्योगिक कम्पनीमा पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूको सहभागिता घटाउने वा पूर्ण रूपमा हटाउने छनौट गर्दछ। यस घटनाले संकेत गर्न सक्दछ कि यस कम्पनीको सेयरहरू आउँदो दिनमा अझ बढी सुधार भइरहेको छ। हालको शेयरधारकहरूको स्थितिलाई दण्डित नगरे सम्म अर्को धेरै फरक कुरा अबदेखि नयाँ लगानीकर्ताहरू बीचमा के हुन सक्छ।
गोरूहरू को दर्शनीय स्थानमा बावरिया
यदि वित्तीय बजारमा तातो मानहरू मध्ये एक हो भने, यो मेडिकल कम्पनी बाहेक अरू कुनै छैन। उसको कारण उसले कम्पनीमा भर्खरको कर्पोरेट आन्दोलन पछि प्राप्त गरेको कडा समर्थनका कारण हो। किनभने वास्तवमा, व्यापार समूह चिनियाँ समूह एयर आई द्वारा हालसालै र चाखलाग्दो अधिग्रहण बोलीको लक्ष्य भएको छ। कम्पनीले १ 170० मिलियन यूरोको अपरेशनमा खरीद गरेको छ।
लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया आउने दिनमा प्रतिबिम्बित हुन सक्छ र हुन सक्छ कि उनीहरूले तपाईलाई यस आर्थिक सम्पत्तिको साथमा के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने बारे महत्वपूर्ण सूचक दिनेछन्। बन्द गर्न वा खोल्नको लागि यस मूल्यबाट उत्पन्न अपेक्षाहरूमा आधारित। यस क्षणको लागि अपेक्षाहरू शेयर बजारमा उनीहरूको स्थिति प्रविष्ट गर्न अनुकूल छन्। तापनि केही सावधानीका साथ एक धेरै चाँडो वा धेरै थोरै विचारशील निर्णय गर्न।
यसको विपरित तपाईं बिर्सनुहुन्न कि यो राष्ट्रिय इक्विटीको सबैभन्दा चिनो मूल्य हो, तर अति खतरनाक ईतिहासको साथ। व्यर्थमा होइन, यो दशकको अवधिमा more०% भन्दा बढी बाँकी छ। यो शेयर मार्केट बेट मध्ये एक हो कि Ibex मध्यम Caps भित्र नराम्रो प्रदर्शन भएको छ। तपाईसँग गहिरो चिन्तन बाहेक अरू कुनै समाधान हुँदैन यदि यो जोखिम लिन र यसको सेयरहोल्डिंगमा स्थिति लिन लायक हुन्छ भने।
गेम्सआ, सबैभन्दा सिफारिश गरिएकोमा
हालका वर्षहरूमा बृद्धि भए पनि, गेम्सा स्पेनिश शेयर बजारको अग्रणी स्टकमध्ये एक हो। र तपाइँ यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ यदि हामी बैंकिन्टरले दिएका सिफारिसहरूमा अडिग रह्यौं भने। यस हिसाबले, यसको हालसालै धेरै गर्न बाँकी छ सीमेन्सको साथ मर्जर र यसले अर्को केहि महिनाको लागि अर्को महत्वपूर्ण बुलस पुल उत्पादन गर्न सक्छ। यस निर्णयमा आधारित एक कारक यस तथ्यमा आधारित छ कि गेम्साले प्रस्ताव गरेको सेवाहरूको यस प्रकारको खर्च यस बर्ष अपेक्षित भन्दा बढी सुधार हुनेछ। व्यापार को यो लाइन को लागी एक बर्ष पहिले भन्दा राम्रो संभावनाहरु संग।
जहाँसम्म, यसले धेरै वर्षको लागि अत्यधिक ठाडो आरोहणको गम्भीर बाधा हो। यस कम्पनीमा धेरै लगानीकर्ताहरू छन् भनेर डराउनु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन फिक्सहरू ढिला भन्दा पछि स्थापना गर्न सकिन्छ। र तिनीहरू आफ्नो खुला स्थितिमा गुमाउन सक्छन् र सायद महत्त्वपूर्ण तरिका भन्दा बढी मा। जे भए पनि, तिनीहरूको मूल्यको विकासको लागि हेरचाहमा आवश्यक हुनेछ।
तपाईंले देख्नु भएको जस्तै, तपाईंसँग सुरुमा कल्पना गरेको भन्दा बढी तातो मानहरू छन्। क्रम लिनको लागि होईन, तर क्षणको लागि तपाइँको अपरेसनको रडारमा ती लिनुहोस् बचतलाई लाभदायक बनाउने। छुट्टीको यी दिनहरू पछि तपाईंसँग तपाईंको अनुरोधको जवाफ हुनेछ। अर्को अर्थमा अर्को अर्थमा त्यो हो कि यी कम्पनीहरूको सेयर बेच्न। जहाँ तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत चासो को लागि सबैभन्दा उपयुक्त के बारे मा निर्णय गर्नु पर्छ।
अवश्य पनि, प्रस्तावहरू स्पेनिश शेयर बजारमा हराइरहेको छैन। सबैको ओठमा केहि, नराम्रो अरूहरू वास्तविक हुन् वा कम्तिमा ती जुन यो नयाँ व्यापार वर्षको सुरूमा तपाईंसँग थिएन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » स्पेनिश शेयर बजारमा तातो मानहरू
जुआन | अनलाइन loansण भन्यो
स्यानट्यान्डर र सबाडेल बैंकहरूको एक जोडी हो जुन बजारमा राम्रो व्यापार गर्दछ। यदि मानिसहरूलाई शंका छ वा यी बैंकहरूको शेयर बजारमा लगानीको बारेमा थाहा छैन भने, तिनीहरूले विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु पर्दछ र उनीहरूले आफ्नै अनुभवबाट थाहा पाउनुपर्दछ कि यदि तपाईंले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ।
जुआनलाई जवाफ दिनुहोस् अनलाइन loansण
एलिसिया Prestamosrapidosweb बाट भन्यो
बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्थाको उतार चढाव र केहीको सार्वभौम विचारहरूको अधीनमा छ, ला काइक्सा वा बान्को डि सबाडेल जस्ता बैंकहरूले धेरै नराम्रो समय पाउनेछन यदि क्याटालोनियाले स्वतन्त्रताको धारणा अनुसरण गरे ... यो हुनुपर्दछ याद गर्नुहोस् कि तिनीहरू उप्रान्त स्पेनको बैंक वा यूरोपियन युनियनले पनि समर्थन गर्दैन (कम्तिमा पनि मेरो धारणा हो)
Prestamosrapidosweb बाट एलिसियालाई जवाफ दिनुहोस्
लगानी कोष कर
लगानी गर्न छवटा मूल वित्तीय सम्पत्ति